abameleli Modern wobulili fair banethuba okukhulu ukushintsha ukubukeka kwakho kaningi njengokuthanda kwakho. Kulokhu Basizwa izimonyo yesimanje kanye, yebo, ezihlukahlukene izinwele imibala. Nokho, uma lolo shintsho kuphephile?
Uma intombazane efuna sina ukushintsha ukubukeka kwakho, ke isilungele ukusetshenziswa umbala egcwele. Ngingathanda nje ukukhumbuza ezinye umonakalo upende ukuze izinwele sisetshenziswa empilweni yabo. Iqiniso lokuthi lo mkhiqizo isayensi yezimonyo iqukethe ammonia, lihlaba ekujuleni isakhiwo abese ebhubhisa follicle izinwele. Izinwele, ukusabela namachibi senzeka, ngenxa lapho imicu ziyashintsha lesikhumba zabo zemvelo. Kodwa isikhathi eside le nqubo ukudaya (okuyinto edingekayo lapho ushintsho olukhulu), umonakalo ngaphezulu kwenziwa. Isikali izinwele emva ubudlova ezinjalo "ume sokuphela" nangokuthi die, okuholela ekulahlekeni nhlobo noma ngokwengxenye umbala zemvelo.
Izinkinga zingavela kakade ezinsukwini ezimbalwa ngemva staining lokuqala, kokuvela indlela ezingemnandi neze. Izinwele iba ezomile, ziyaqothuka futhi ethambile, udidekile ikamu ezimbi futhi zidinga egeza njalo. Inqubo yesibili - futhi kubalulekile, njengoba izimpande eqala ukukhula ngokushesha - kungaba kuyonezela sifo kungaholela emiphumeleni engathí sina.
Nokho, akubona bonke imibala ngokulinganayo yingozi. Abanye imibala izinwele wemvelo ukuletha izinkinga okuningi abanye okuyingcosana. Ukunika curls efanayo ezimhlophe ukubasa shades angaya cishe kobuhlungu, kuyilapho ephelele umbala ushintsho (kusuka blonde kuya Brunette noma okuphambene nalokho) kungabangela umonakalo ongalungiseki ngempela.
Indlela yokugwema izinkinga
Kungaba efiselekayo Strand isikhathi eside ngemva staining ukulondoloza ukubukeka enempilo futhi ekhangayo? Kunezindlela ezimbili - ukusebenzisa upende njalo ngesonto noma usebenzise ezinye amathuluzi angakusiza ngcono izinwele futhi ubuyisele ubuhle babo. Yiqiniso, samuntu yesibili kungcono ngoba amakhemikhali ayingozi staining staining kungenzeka esebenza. Ngemva izinwele atholwe umbala oyifunayo, kumele bahlanza njalo, shampooed futhi moya ngohlobo olukhethekile ukululaza isinyathelo ammonia kanye nokunciphisa isakhiwo sabo.
A ikhambi elihle ingaba njengesihluthulelo imaski izinwele ngaphansi Umbala, moisturizes futhi uyasondla ekhanda futhi imicu ngokwabo. La mathuluzi kuthinte izikali izinwele, bushelelezi kubo, ukusiza ngokushesha ukuncela zombala futhi inhlamvu ukukhula.
Emva inqubo staining ngabe yikuphi hhayi ungasebenzisa hot air dryer. Uma ufuna ome izinwele zakho ngokushesha - ukusebenzisa izikhatha zomoya oshisayo, ngisho kangcono - cool. Futhi kuhle - ake sizomele.
Ukuze uqinise izinwele, inqubo lokugcina repainting, kungabasiza abanye amakhambi ekhaya. Ukudla nakanjani Udinga ukufaka amaqanda - umthombo kubalulekile curls impilo amaminerali, izakhi kanye amavithamini, kanye senze lo mkhiqizo okunomsoco buso, inkanuko izinwele zikhula zibheke ngakhona.
Shintsha ngaphandle ingozi?
Kodwa namanje abanye shades kapende abakwazi ukunikeza izinwele - ngakho uthi abesifazane abathile. Ukuze umthunzi Kwakumnandi nezemvelo, kufanele uzame zemvelo Umbala ejenti, isibonelo, zehena, noma izidakamizwa engashiyi, okuyinto zingenalo ammonia. Lezi zindlela ngeke ukunikeza umphumela onjalo nje chemical izinwele udayi, kodwa kungakusiza ukuthenga ubuntu elikhanyayo ngaphandle ingozi empilweni imihlobiso induna fair yimuphi owesifazane.
Izimfihlo nobuchwepheshe be-Hollywood: izinwele zokwandisa (ukubuyekezwa)
Yini igcwele sokukhulelwa ekuqaleni?
Muffin nge raspberry: zokupheka best